आज मकर संक्रान्तिमा राशि अनुसार के दान गर्दा कस्तो फल मिल्छ ?
Homeरोचक / विचित्रआज मकर संक्रान्तिमा राशि अनुसार के दान गर्दा कस्तो फल मिल्छ ?
January 14, 2020 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on आज मकर संक्रान्तिमा राशि अनुसार के दान गर्दा कस्तो फल मिल्छ ?
ज्योतिष शास्त्रमा बार अनुसारकाे राशि फरक फरक हुन्छ । त्यस्तै, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक राशिफलबाट मानिसको हप्ता, महिना र वर्ष दिन कस्तो रहनेछ भन्ने भविष्यवाणि गरिन्छ । त्यतिमात्र नभएर विभिन्न पर्वमा कुन राशि भएका हरुले के दान गर्दा पुण्य मिल्छ भन्ने विषयमा समेत फलादेश गर्ने गरेको पाइन्छ । बुधबार मकर संक्रान्ति अर्थात माघि संक्रान्ति पर्व । यो पर्वमा राशि अनुसार के दान गर्दा कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेष – मेष राशि भएका व्यक्तिले पहेंलो फूल, हल्दी, तिलमा पानीमा मिसाएर सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। यो राशि भएकाले तिल र गुड दान गर्नुहोस् । यसोगर्दा तपाईले उच्च स्थान पाउनुहुनेछ।
वृष – सेतो चन्दन, दूध, सेतो फूल, तिललाई पानीमा राख्नुहोस् र सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। ठूलो उत्तरदायित्व प्राप्त गर्ने र महत्त्वपूर्ण योजनाहरू शुरु गर्ने सम्भावनाहरू बढ्नेछ ।
मिथुन – तिल, दुबो र फूलहरू पानीमा मिसाउनुहोस् र सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। गाईलाई हरियो घाँस दिनुहोस्। मुंग दालको खिचडी दान गर्नुहोस्। यसो गर्नाले खुशी प्राप्ति हुनेछ।
कर्कट – दूध, चामल, तिललाई पानीमा मिसाउनुहोस् र घामलाई अर्पण गर्नुहोस्। चामल, चिनी, तिल दान दिनुहोस्। संघर्ष र द्वन्द्वको अन्त्य हुनेछ।
सिंह – कुमकुम र रातो फूल, तिललाई पानीमा राख्नुहोस् र सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। तिल, गुड, गहुँ, सुन दान गर्नुहोस्। यसो गर्नाले उपलब्धि हासिल हुनेछ।
कन्या – तिल, दुबो र पानीमा फूलहरू थपेर सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस । मुंग दालको खिचडी दान गर्नुहोस्। गाईलाई घाँस लगायत खाना खुवाऊनुहोस। तपाईंलाई राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ।
तुला- सेतो चन्दन, दूध, चामल, तिल मिसाएर सूर्यलाई अर्पण गर्नुहोस्। चामल दान गर्नुहोस्। व्यापारमा बाह्य सम्बन्धबाट लाभहुनेछ साथै शत्रुहरू परास्त हुनेछन्।
वृश्चिक- कुमकुम, रातो फूल र तिललाई पानीमा राखेर यसलाई सूर्यमा अर्पण गर्नुहोस्। गुड दान गर्नुहोस्। विदेशी काम र विदेश यात्राबाट फाइदा हुन्छ।
धनु – हल्दी, केसर, पहेलो फूल पानीमा राखेर सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस् । यसो गर्दा चारै तर्फबाट विजय हुनुहुनेछ।
मकर – गाढा निलो फूलहरू र तिललाई पानीमा राखेर सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। गरिबहरूलाई खाना खुवाउनुहोस । यसोगर्दा विभिन्न कुरामा तपाइको अधिकार प्राप्त हुन्छ।
कुम्भ – नीलो-कालो फूलहरू, सरसौंको तेल र तिललाई पानीमा मिलाउनुहोस् अनि सूर्यलाई अर्पण गर्नुहोस्। तेल र तिलको दान दिनुहोस्। विरोधीहरू पराजित हहुनेछन्। विभिन्न प्रकारका भेटी र सम्मान प्राप्त हुनेछ ।
मीन – हल्दी, केसर, पहेंलो फूल, तिल एकै ठाउँमा राखेर सूर्यलाई अर्पण गर्नुहोस्। सरसों, केसर दान गर्नुहोस्। यसबाट सम्मान, ख्याति बढ्नेछ।
घरेलु हिं’साको सिकार भएकी, आफ्नै पतिबाट तिरस्कृत भएकी हिमा श्रेष्ठको कहानी निकै द’र्दनाक छ। विदेशमा दु:ख गरेर कमाएको सबै सम्पती खाएर कु’टपि’ट गर्नुका साथै शारिरिक र मानसिक या’तना दिएर घर निकाला गरी एक्लो जीवन बिताईरहेकी हिमाका श्रीमान्ले उनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। हिमाको कोठामा आएर छायाँ नाम गरेकी सुनिता थापा मगरले आफुलाई या’तना दिएको भन्दै हिमाले ‘मलाई बचाउनु’ भन्दै रुँदै मिडियामा आएकी थिईन् ।
टेकु प्रहरीको शरणमा पुगेकी हिमामाथि आ’क्रमण गर्ने छायाँलाई प्रहरीले उनले गरेको गल्तिको क्षमा माग्ने आदेश दिएकोमा मिडियाले उनलाई प्रश्न गर्न खोज्दा मिडियाबाट भागेकी थिईन्।पुन: एकपटक छायाँले आफ्नो बारम्बार चरित्र ह’त्या गरि समाजमा मुख देखाउन लायक नछोडेको भन्दै हिमाले आ’त्मह’त्या गर्नु सिवाय अब विकल्प नरहेको बताएकी छिन् । सुनिता थापा मगर (छायाँ) ले चरित्र ह’त्या गरी ब’दनाम गरेर भन्दै हिमा मिडियामा आएकी छिन् ।
एक भिडियोका कारण आफ्नो इ’ज्जत लि’लाम भएको र अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारवाही अगाडी बढाउने र भिडियो नहटाए छायाँ र अन्तर्वार्ता लिने दुवैको नाम लेखेर आफ्नै डेरामा म’र्छु भन्दै हिमा आ’क्रोशित बनेकी छिन् । अरुको चरित्र ह’त्या गरेर अरुले पैसा कमाउन खोज्छ भने आफु कानुनी लडाईं लड्न तयार रहेको बताएकी छिन् । हेमा र पुण्य दुईटा ब*च्चा तान्दै फेरी टेकु चौ*की पुगेका छन् । एसपी सर्वेन्द्र खनालले सिधै छायाँलाई सम्पर्क गरेपछि अब यस घटनाले नयाँ मोड लिने निश्चित देखिएको छ । हेरौँ भिडियोमा :
प्रदेश सरकारले गर्यो भोलि माघ १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा
अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै सुत्केरीको मृ’त्यु भएपछि नवजात शिशुको विचल्ली